Flọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ngwa ngwa, ndị na-ebunye ya - China Industrial Fluid Rubber Hose Manufacturers
Chemical sooks nwere ezigbo ego Mwube Tube: White, ezigbo Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE), EPDM Ndozi: High tensile akwa eriri na helix nchara waya Cover roba: EPDM eguzogide ọgwụ, weathering na ozone, acha anụnụ anụnụ, green ọbọp ma ọ bụ corrugated. Ezigbo ịrụ ọrụ okpomọkụ: —40 ℃ ~ 120 ℃ (-72 ℉ to + 248 ℉). Ihe nchebe: 3: 1. Ngwa Mgbanwe UHMWPE chemical sooks na ọtụtụ-eji mmiri na ihapu ike asịd na alkali na nile di iche iche nke ụlọ ọrụ mmiri mmiri. Ma ...
White, sooks, NR, NBR ma ọ bụ EPDM nri mma roba sooks: Food, ezigbo, NR, NBR ma ọ bụ EPDM nri quality roba sooks: Multiplies elu ike sịntetik akwa na helix waya Cover: ezigbo (ọbọp n'isi), sịntetik roba, ọcha, acha anụnụ anụnụ, green ọbọp ma ọ bụ corrugated. . Okpomọkụ: -32 ℃ ruo 80 ℃ (-90 ℉ ka + 176 ℉) Ngwa Ngwa nri ọkwa mgbanwe sooks na-ọtụtụ-eji mmiri na ihapu ihe ọ juiceụ juiceụ, mmanya, mado nri na oriri oriri wdg Agwa: The mail e ji mara ndị ọzọ mgbanwe, ịka nká -resi ...
Textile mesikwuru Air sooks na High Pressure Onye ọ bụla sooks na-anwale na 1.5 ugboro nke na-arụ ọrụ mgbali, elu roba ọdịnaya enweghị recycled roba. Construction tube: NR & SBR sịntetik roba, nwa agba. Mkwado: High tensile akwa ụdọ ma ọ bụ eri ịkpa isi. Cover: NR & SBR synthetic roba, ezigbo ma ọ bụ ọbọp elu, nwa, odo, red dị. Ngwa A na-ejikarị eme ihe maka ikuku nke ikuku, gas na mmiri na-egwupụta ihe, ihe owuwu, injinia, ụlọ ụgbọ mmiri, ngwaahịa ngwaahịa ...
Mmiri mmiri na nsị sooks tube: Black, ezigbo, NR, SBR roba compound. Mkwado: High tensile akwa ụdọ na helix ígwè waya. Cover: Black, ezigbo, echiche echiche ma ọ bụ corrugated, SBR roba compound. Ezubere ụdị eriri a maka mmiri na mmiri, na mmiri na-adịghị emebi emebi nke eji eme ihe na saịtị ndị na-arụ ọrụ ọkụ na-arụ ọrụ ngwa ngwa.
Tank mmanụ mmiri mmiri sooks Tubel Tube: Nwa, Ezigbo, NBR. Mkwado: High tensile akwa ụdọ na helix ígwè waya. Cover: Black / red / green, ọbọp elu ma ọ bụ corrugated, ihu igwe na ozone. na-eguzogide ọgwụ, roba sịntetik. Ihe nchebe: 3: 1. Okpomọkụ: -30 ℃ (-22 ℉) ruo + 80 ℃ (+ 176 ℉) Ngwa Maka mmịpụta na nhapu nke ngwaahịa ndị sitere na mmanụ ala, mmanụ dizel, mmanụ ụgbọala, ndị na-ete mmanụ, mmanụ. Ọ na-eguzogide agụụ, ọkụ eletrik na-enweghị ike, na waya ọla kọpa.
Mmanụ ụgbọ mmiri
Hydraulic sooks Mwube Tube: Black, Ezigbo NBR + SBR Ndozi: High tensile akwa ụdọ na helix ígwè waya. Cover: Black / red / green, ọbọp elu ma ọ bụ corrugated, ihu igwe na ozone. na-eguzogide ọgwụ, roba sịntetik. Ihe nchebe: 3: 1. Okpomọkụ: -20 ℃ (-4 ℉) ruo + 80 ℃ (+ 176 ℉) Ngwa A na-ejikarị ya arụ ọrụ igwe eletriki, nkwụghachi azụ, ụgbọ ala injinia, wdg, aromatic hydrocarbon content anaghị agafe 20%. Njirimara Ihuigwe na mkpuchi abrasion. Ma sm ...
Super abrasion eguzogide sandblast sooks tube: Black, ezigbo, NR sịntetik roba Mkwado: Iba ụba Akwa ike sịntetik ákwà Cover: Black, ezigbo (ọbọp), abrasion eguzogide NR sịntetik roba Ngwa Soft mgbidi abrasion eguzogide sooks maka nnyefe nke ígwè gbaa, ájá. , ngwa mkpọchi bekee Okpomọkụ: —20 ℃ (-4 ℉) ~ 80 ℃ (+ 176 ℉) Njirimara: Ngwunye Sandblast anyị bụ maka ngwa ngwa sandblast. Ọ e mere maka elu ike ọsọ nyefe nke ájá, ígwè shot, ihe ...
Ijikwa Ihe sooks
Akwa eyi na-eguzogide ọgwụ njikwa ihe sooks tube: Black, ezigbo, NR + BR sịntetik roba. Mkwado: High tensile akwa ụdọ ma ọ bụ elu ọdụdọ akwa eriri na helix nchara waya. Cover: Black, ezigbo (ọbọp) ma ọ bụ corrugated, abrasion na-eguzogide ọgwụ NR sịntetik roba. Okpomọkụ: —20 ℃ (-4 ℉) ~ 80 ℃ (+ 176 ℉) Ngwa Abrasion na-eguzogide ọgwụ tube na mkpuchi echepụtara na kasị mma ihe. Ejiri ya na mbufe nke ihe akọrọ & slurry na ezigbo maka ciment akọrọ, lime okwute na ihe ndị ọzọ abrasive m ...
High eyi eguzogide akọrọ ciment sooks mwube tube: sịntetik roba, eyi na-eguzogide ọgwụ na mmetụta na-eguzogide ọgwụ (NR + BR). Nkwado akwa: akwa akwa akwa akwa akwa roba: NR + SBR Ihe nchekwa: 3: 1 Ọnọdụ okpomọkụ: -20 ℃ (-4 ℉) ~ 80 ℃ (+ 176 ℉) Ngwa: Abrasion na-eguzogide ọgwụ na mkpuchi na-eji akwa kachasị mma. Eji ya na mbufe ihe akọrọ & slurry na ezigbo maka ciment akọrọ, lime okwute na ndị ọzọ abrasive media. Njirimara N'ime ime ka nke elu w ...
Construction tube: NR & SBR sịntetik roba, nwa agba. Mkwado: High tensile akwa ụdọ. Cover: NR & SBR synthetic roba, ezigbo ma ọ bụ ọbọp elu, nwa, odo, red dị. Temperaturerụ ọrụ okpomọkụ: -20 Celsius C-80 Celsius C Uru 1. Nguzogide abrasion, corrosion, okpomọkụ na ịka nká Lightweight, siri ike, inogide na ogologo ọrụ ndụ. 2.Rolls elu ewepụghị dị mfe nkwaghari, nlata na njikwa. 3. fechaa, siri ike, inogide na ogologo ọrụ ndụ. 4.Easy ịgbatị ogologo ogologo na sooks coupl ...
Steam Ma Hot mmiri sooks
Steam na mmiri ọkụ sooks tubing Construction: Black, ezigbo, Iguzogide oke okpomọkụ jupụtara uzuoku EPDM sịntetik roba. Nkwado oyi akwa: High tensile akwa eriri Safety ihe: 4: 1 Cover: Black / ọcha / acha anụnụ anụnụ / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ezigbo (ọbọp imecha) sịntetik EPDM roba. Igwe dị elu, ihu igwe na ozone na - eguzogide ọgwụ. ...